Dood: Afrika ma inay ka go'daa gumaystaheedii hore? Marka Ninka Madow / Afrikaanka ahi Xushmeeyo Ninka Madow / Afrikaanka, Cidina kuma Socon Doonto Madow / Ninka Afrikaanka ah
Posted By: KongoLisolowaa: Nofembar 30, 2019 00: 15 No Comments
Jawaabta KongoLisolo: murugadan liita ayaa meesha ka bixi doonta oo keliya haddii dadka madow / afrikaanka ahi ogaadaan taariikhdii sharafta lahayd ee madowga / afrikaanka iyo doorkooda ku aaddan horumarka ilbaxnimada hadda jirta. Madow yar / Afrikaan ah ayaa yaqaana taariikhda dhabta ah ee Afrika laga soo bilaabo Masar qadiimiga ilaa Boqortooyada Zulu!
Telefishanka qoysaskayaga Madow / Afrikaanka waa mid ka mid ah aaladaha ugu awoodda badan burburintii qiimaheena Black / Afrika.
Saxaafaddu waa hay'adaha ugu awoodda badan dunida. Waxay awood u leeyihiin inay ka dhigto dambiilaha mid aan wax galabsan iyo in ay kuwa aan xaqa lahayn eedeeyaan. "Taasina waa awood, maxaa yeelay waxay xukumaan maskaxda dadka."
Maahmaah & hadalka: De Malcolm X